China IV Catheter fekitori uye vagadziri | Medicom
Iine jekiseni chiteshi / butterfly mhando / Pen senge
Tsono yakaitwa kubva yepamusoro yezvokurapa giredhi 304stainless simbi
Iyo hubhu uye chifukidziro chinoitwa kubva pakurapa giredhi PC uye PE
Iyo chubhu inogadzirwa kubva kuTeflon ine matatu akasimbirwa x-ray mutsauko mitsara
Gadziridza maoko ako uchishandisa chinonatsa doro.
Isa ruoko ruoko kuti rwugadzikane nemurwere uye azive tsinga
Isa iyo yekutenderera uye wongororazve mutsinga
Pfeka magirovhosi ako, suka ganda remurwere nedoro rinopukuta uye rega riome.
Bvisa cannula kubva mumapakeji ayo uye bvisa tsono yekuvhara uone kuti usabata tsono.
Tambanudza ganda kure uye zivisa murwere kuti vanofanirwa kutarisira kukwenya kwakapinza.
Pinza tsono, bevel kumusoro kumusoro anenge makumi matatu madhigirii. Tungamira tsono kusvika iko kuyerera kweropa kuchionekwa mukati mehubhu iri kumashure kwekanora
Kana iko kungoonekwa kweropa kumashure kwaonekwa, fambisa iyo mbichana imwe 2mm, wozogadzirisa tsono, uchisimudzira yakasara kaniini kupinda mutsinga.
Sunungura mutambo, shingairira mutsinga kumucheto wecannula uye bvisa tsono zvizere. Bvisa kapu kubva mutsono uye isa izvi kumagumo e cannula.
Ngwarira kurasa tsono mumudziyo unopinza.
Nyorera kupfekedza kune canunula kuti uigadzire panzvimbo uye uve nechokwadi chekuti chinamirwa chedheti chakapedzwa nekuiswa.
Tarisa uone kuti iko kushandiswa-nezuva pane iyo saline hakuna kupfuura. Kana iwo musi wacho wakanaka, zadza sirinji neine munyu uye uiuraye kuburikidza nekanora kuti utarise patency.
Kana paine kupokana, kana kukonzeresa chero kurwadziwa, kana iwe ukacherekedza chero kuzvimba kwenzvimbo kuzvimba: pakarepo mira kupuruzira, bvisa cannula wotangazve.
Rasa mushure mekushandisa kamwechete.
Mumwe akaomarara mhoni kurongedza
50pcs / bhokisi 1000pcs / atorwa
OEM sevhisi inowanikwa
Zvitifiketi: CE ISO Yakatenderwa
1. Usashandise kana pasuru yakanganisika
2.Kushandisa-nguva-imwe, ndapota rasa mushure mekushandisa
3. Usachengetedze muzuva
4. Chengeta pasingasviki vana
5.Usaitazve jekiseni kana nguva yekutanga ikakundikana
Nguva yekushanda: 5Makore.
Chena: Yakachena neEO gasi
Pashure: Nhatu Nzira Stopcock
Zvadaro: Combi Stopper
KN95 Chiso Mask
Kuvhiya Nereza Sizes, Doro Kugadzirira Pad, Kubvisa Catheter, Mucheche Kudyisa Tube, Doro Pad, Iv Catheter,